apache common file upload — MYSTERY ZILLION
September 2014 in Java
apache common fileUpload အကြောင်း example ရေးထားတာ လိုချင်လို့ Internet က ရှာတာလဲ သိပ်နားမလည်လို့ပါ ....
user guide က http://commons.apache.org/proper/commons-fileupload/using.html မှာ ရှိတယ်မဟုတ်လား ?
ကို saturngod ပေးထားတဲ့လင့်က official လင့်ပါ။ အဆင်သင့်ရေးပြီးသား ကုတ် example လေးကို ရေးထားတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ Google မှာရှာကြည်.ပါ ။ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ JQuery ကို အသုံးပြုပြီး ဖိုင်တွေ upload လုပ်တုန်းက သုံးဖူးပါတယ်။
GitHub Link >>> https://github.com/amilarajans/jQuery-File-Upload-for-java/blob/master/src/info/sudr/file/UploadServlet.java
သိပ်နားမလည်လို. ဆိုတာကတော့ ဗျာ Servlet အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိရင် နားလည်ပါတယ်။ ခင်ဗျား ဘာကိုနားမလည်တာလဲ ဆိုတာကတော့ ထပ်မေးမှာပဲ သိမှာပေါ့ဗျာ။